RASMI: Claudio Marchisio oo ka tagay kooxda Zenit St Petersburg – Gool FM
(St Petersburg) 01 Luulyo 2019. Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Juventus Claudio Marchisio ayaa si rasmi ah uga tagay naadiga Zenit St Petersburg, kaddib markii ay heshiiskooda si wadajir ah u joojiyeen.
Kooxda Zenit ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay caawa bayaan u dhignaa: “Kooxdu waxa ay xaqiijin kartaa in heshiiska Claudio Marchisio si wadajir ah loo joojiyey.”
“Zenit waxa ay jeceshay inay Mahadsanid tiraahdo Claudio wakhtigiisii kooxda, isla markaana waxaan u rajaynaynaa isaga sida ugu fiican mustaqbalka.”
33-sano jirkaan ayaa laga fasaxay Juve bishii Agoosto sanadkii 2018-kii, waxaana bil kaddib uu heshiis cusub oo ku eg sanadka 2020 u saxiixay kooxda Zenit.
Yeelkeede, kaddib markii dhaawacyo dhanka jilibka ah ay hareeyeen ciyaaryahankan ayaa kaliya 15 kulan u saftay kooxda ka dhisan dalka Ruushka, inkastoo uu u dhaliyey labo gool.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Talyaaniga ayaa si fiican u qaab ciyaareed garanaya kooxda Old Lady lagu naanayso, waxaana uu u ciyaaray 389 kulan, isagoo kula guuleystay todoba horyaalka Serie A ee Scudetti, isla markaana la gaaray labo jeer final-ka Champions League.
Iyadoo kooxda Juve ay dib ula midoobi doonto goolhaye Gianluigi Buffon, ma jiraan wax soo jeedin ah oo ku aaddan booskiisa xiga ee Claudio Marchisio, mana la shaacin illaa iyo haatan halka uu ku wajahan yahay.